James Maddison Tantara an-tsary momba ny tantaram-pahaterahana malaza tsy fantatra
Home TOROHEVITRA FOTSORATRA TSY MISY MPANJAKA Mpilalao Football English James Maddison Tantara an-tsary momba ny tantaram-pahaterahana malaza tsy fantatra
Ny LB dia manolotra ny tantara feno momba ny "football genius" izay fantatra amin'ny anaram-bosotra "Madder". Ny tantaram-pianakaviantsika James Maddison momba ny tantaram-pahibemaso sy ny tantaram-piainana tsy fantatra dia mitondra fitantarana feno momba ireo zava-mitranga mahatalanjona avy amin'ny fahazazany hatramin'ny fahazazany. Ny fanadihadihana dia ny fiainam-piainany, ny fiainam-pianakaviany, ny tantaram-piainana talohan'ny laza, ny fiantsoana tantara, ny fifandraisana ary ny fiainana manokana sns.
Eny, fantatry ny rehetra fa iray amin'ireo mpilatsaka an-tsitrapo anglisy tsara indrindra amin'ny anglisy izy. Na izany aza, vitsivitsy ihany no mandinika ny tantaran'i James Maddison izay tena mahaliana. Ankehitriny tsy misy ado, alefaso.
James Maddison Tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana tsy hita isa-tantarana biography- Voalohandohan'ny fiainana
James Daniel Maddison dia teraka tamin'ny andro 23rd ny volana 1996 tamin'ny reniny, Una Maddison sy ny rainy, Gary Maddison tany Coventry, Angleterre. Teraka tamin'ny maha-zanaka voalohany sy zanaka an'i ray aman-dreniny be fitiavana i James, sary famantarana an'i Una sy Gary.
Ny fiavian'i James Maddison:
Mifanohitra amin'ny finoan'ny besinimaro, i James Maddison no niandoha avy any amin'ny Repoblika Irlandy tamin'ny alàlan'ny iray amin'ireo dadabe sy renibeny izay Irish.
Nihalehibe niaraka tamin'ny zandriny lahy i Maddison ary avy tamin'ny fianakaviana teo afovoany izy. Taloha dia nitombo ny ankohonany ny vola latsaky ny baolina kitra. Tamin'izany fotoana izany izy nanana tokantrano misy fianakaviana akaiky izay nanana mpanohana an'i Manchester United, anisan'izany i James. Ity ambany ity ny lahatsarim-pampitam-peo izay mampiseho an'i Maddison mitafy ny fanatanjahan'i Manchester United rehefa milalao baolina amin'ny maha-ankizilahy azy.
Nanjary nifankahala tamin'ny lalao izy:
Ny tranon'ilay fianakaviana James Maddison dia dingana roa minitra avy eo amin'ny Ivontoerana Alan Higgs izay fonenan'ny Akademian'ny Football Academy Coventry.
Io akaiky akaiky io dia nanjary antony nahatonga an'i Maddison ho liana hatrany amin'ny fanatontosana asa matihanina izay tsy nahita azy hatrizay hatrizay.
James Maddison Tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana tsy hita isa-tantarana biography- Career aloha
Ny baolina kitra tsy misy fisalasalana dia nitarika ny tanora Maddison lavitra ny safidin'ny safidy safidy hafa izay azony natao tahaka ny zaza. Nanomboka izy noho ny fananan'ireo ray aman-dreniny azy ho mpianatra pre-Akademia raha mbola ao amin'ny Richard Lee Primary School izy.
Nanampy tamin'ny famolavolana baolina kitra tsara ho an'ny baolina kitra i Maddison, taona talohan'ny fampiofanana, izay nanefa mazava tsara ny dividends. Izy dia anisan'ireo ankizy mpilalao baolina hafa nandany ny takarivany (taorian'ny ora fianarana) nilalao baolina kitra, hany fanatanjahantena tiany. Ity ambany ity ny sariitatry ny lahatsary fanatontosana ny fampiofanana mialoha ny académie Maddison izay nitranga tamin'ny Martsa 2004.
Fiainana tany am-piandohana tao amin'ny Academy Coventry:
Maddison dia anisan'ireo zazakely kely indrindra izay nandalo fitsapana maimaim-poana izay nahatonga azy hisoratra anarana tamin'ny tanora Coventry tamin'ny taona 9. Fotoana nanovan'ny ray aman-dreniny ny sekoliny. Maddison nanatrika ny Sekolin'i Castle School ao Caludon.
Mahafinaritra ny fiainana ao amin'ny academy, saingy tsy maintsy nanao sorona be loatra i Maddison tany am-piandohana. Nalainy haingana ny làlan-kizorana avy amin'ny zazalahy kely sy kely indrindra ho an'ny mpianatra tsara indrindra ao amin'ny taom-piarahamoniny. Ny fitomboan'ny vokatra dia vokatry ny asa mafy izay nitarika ho amin'ny loka nahazo ny anjara asany amin'ny fandraisana anjara amin'ny lalao fifaninanana. Jereo ny lahatsary manaraka etsy ambany;
James Maddison Tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana tsy hita isa-tantarana biography- Road to Fame
James Maddison nandritra ireo taon-jazakely voalohany dia nanomboka nampiseho ny tena fototry ny mpilalao miditra sy mpilalao baolina kitra ho an'ny tarika Coventry. Na dia kely aza izy dia nanjary lasa Maddison Show-Boy izay hanafaka isaky ny asaina hamorona tanjona. Izany fahatsarana izany dia nanome azy ny No: 10 jersey.
"Ny Tsia: Ny anjara asan'ny 10 dia nanampy ahy hanorina ny toetranao satria ny faritra afovoany afovoan-tanàna dia feno olona matanjaka sy matanjaka izay nilalao midifika fiarovana tahaka ny mpanohitra," hoy i Maddison.
Ity ambany ity ny lahatsarim-pamokarana nataon'i James Maddison ny famoronana tanjona voalohany sy ny fahaiza-manao.
Lasa mpamory lohateny:
James Maddison araka ny TheGuardian indray mandeha dia nanaiky handray ny singa Philippe Coutinho's lalao ho an'ny tenany manokana. Maddison's No: Ny anjara asan'ny 10 dia nahita azy tsy nanamboatra tsirony fotsiny ho fanatsarana sy fanangonana trophies. Tsikino etsy ambany, porofo amin'ny lahatsary.
Nofaranan 'i James Maddison ny asany tanorany ho anisan'ny mpilalao lehibe sy mahay indrindra ao amin'ny taranany Coventry. Noho ny fahaizany mamintina sy mamorona tanjona, dia nokaramaina izy hilalao ny lalao Cage Football izay mihoatra ny andrasana araka ny mahazatra.
James Maddison Tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana tsy hita isa-tantarana biography- Mitsangàna mba ho ankizilahy
Ny sehatry ny 2013-2014 dia nahita an'i Maddison tafiditra tao amin'ny ekipa voalohany ekipa Coventry izay nanohizany nanazava.
Tamin'ny janoary 2016, na dia teo amin'ny dingana fahatelo tamin'ny baolina anglisy (League One) aza, Maddison dia navotsotry ny klioban'ny Premier League niaraka tamin'i Liverpool izay te-hividy azy tsara indrindra. Na izany aza, tsapany fa tsy mety ny fotoana tokony handehanany amin'ny baolina kitra Anglisy.
Nanapa-kevitra ny hifindra tany Norwich i Maddison mba hahafahany manakaiky ny fianakaviany. Ny volana manaraka, ny fahombiazany tamin'ny ekipan'ny klioba dia nahita azy niditra tao amin'ny Anglisy ambany-21 ekipa tamin'ny Martsa 2016.
Taorian'ny fanombohan'ny fanombohan'ny 2018 / 2019 ho an'i Leicester miaraka amin'ny tanjona Premier League ho an'ny baolina kitra, mpitantana ny England amin'izao fotoana izao Gareth Southgate dia voatery niantso an'i James Maddison niaraka tamin'ny kintana anglisy iray Jadon Sancho ny senior team tamin'ny Oktobra 2018. Ity hetsika mahatalanjona ity dia nahita ny nofinofin'i Maddison tsy hilalao firy ho an'ny fireneny intsony. Ny ambiny, araka ny filazan'izy ireo, dia tantara.
James Maddison Tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana tsy hita isa-tantarana biography- Relationship Life
Ny vady malalan'i James Maddison izay iray dia tsy afaka mandinika ny mason'ny vahoaka fotsiny satria ny fiainam-pitiavan'izy ireo dia tsy dia mahaloa-peo loatra ary mety tsy misy tantara maimaim-poana.
Ny marina, te-hifantoka amin'ny asany i James Maddison ary nikatsaka ny hisorohana ny lanjany manokana eo amin'ny fiainany manokana. Mampalahelo amintsika izany fa manana ny zava-misy momba ny fiainam-pitiavany sy ny fiarahantsika tantara isika.
James Maddison Tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana tsy hita isa-tantarana biography- Fiainana manokana
Ny fahafantaranao ny fiainan'i James Maddison dia hanampy anao hahazo sary feno azy.
Maddison dia olona liana sy mavitrika izay manana saina misokatra sy manana vazivazy lehibe. Ny hafanam-pony amin'ny fiainana ary ny zava-dehibe indrindra amin'ny fianakaviany dia tsy misy fetrany. Ity dia hita amin'ny fihetsikiny mampihomehy sy mampihomehy amin'ny olona tiany.
James Maddison Tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana tsy hita isa-tantarana biography- Fiainana ao amin'ny fianakaviana
Maddison dia manana tambajotra matanjaka avy amin'ny sehatry ny fianankaviany eo anivon'ny fianakaviana. Ny tsirairay dia nandray anjara tamin'ny androny, toa an'i Gary Maddison, ray malalany, araka ny hita ao amin'ny lahatsoratry ny fahatanorany.
Na dia eo aza ny fanohanana, dia fantatr'i James fa ny farany dia aty aminy mba hanatanteraka sy hanehoana ny zavatra azony atao eny amin'ny lampihazo. Na dia eo aza ny fametrahana fifandraisana misy eo amin'ny rainy sy ny rainy amin'ny fitsarana baolina kitra, dia fantatra fa akaiky kokoa ny mamaniny i Maddison araka ny nambara avy amin'ny lahatsoratry ny media sosialy.
Samy mbola manana ny fahazarana mijery mivantana ny lalao ny zanany sy ny dadany, ny lalao ny zanany manontolo amin'ny fotoam-bavaka ary tsy mieritreritra ny hivezivezy manerana ny firenena amin'ny faran'ny herinandro sy ny andavanandro mba hijery an'i James manao izay tsara indrindra eo amin'ny sehatry ny lalao.
James Maddison Tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana tsy hita isa-tantarana biography- Untold Facts
Ny Tattoo Tacts:
I James Maddison dia manana tata feno tattoos ny sandriny izay tsy natao fotsiny ho amin'ny lamaody. Ny tattoos eo amin'ny sandriny havia dia manokana azy.
Maddison dia nanamboatra tatoazy mba hanamarina ny zava-misy momba ny fianakaviany izay manana ny ampahany lehibe indrindra izay mamaky; "Ny fitiavana ny fianakaviana dia fitahiana lehibe indrindra eo amin'ny fiainana. "
Ankoatra izany, io foto-dresaka manokana io ihany koa dia voamarika ho toy ny tatoazy eo amin'ny sandriny. Ny andro nofinofiny ho lasa mpilalao baolina matihanina dia tanteraka.
I James Maddison dia tratra tao amin'ny tantara ratsy iray izay nahitana azy, ny namany ary ireo vondrona tsy fantany. Nidera ny vahiny izy nandritra ny fotoana nahavitan'ny £ 7,000 isan-kerinandro talohan'ny namelezany ny iray tamin'ireo lehilahy noho ny tsy nahafantarany an'i Maddison ho olo-malaza. Rehefa nangatahana ny hitantara ilay zava-nitranga, dia nilaza ny iray tamin'ireo niharam-boina;
"Nilaza izy fa manome £ 7,000 isan-kerinandro. Nilaza izy fa manome vola bebe kokoa isam-bolana izy fa tsy isan-taona. Tsy nanontany izay nataoko izy. Nilaza izy fa sarobidy kokoa noho ny akanjo ataonay ny kiraronay. "
MIEZAHA HAHAY: Misaotra noho ny famakiana ny tantaram-pitiavan'i James Maddison momba ny tantaram-pitiavana sy ny zava-misy marina momba ny tantaram-piainana. amin'ny LifeBogger, Miezaka izahay mba hanana ny marina sy ny rariny. Raha mahita zavatra izay tsy mety, dia zarao aminay ny fanehoan-kevitra eto ambany. Hanome voninahitra sy hanaja ny hevitrao foana izahay.